प्रदेशस्तरी टी–२० क्रिकेट छनोट प्रतियोगितामा बाँके र रुपन्देही फाइनलमा - Butwal Online
प्रदेशस्तरी टी–२० क्रिकेट छनोट प्रतियोगितामा बाँके र रुपन्देही फाइनलमा
शुक्रबार, फाल्गुन २४, २०७५
भैरहवा, २४ फागुन । प्रदेशस्तरी टी–२० क्रिकेट छनोट प्रतियोगितामा शुक्रबार भएको खेलमा विजयी हुँदै बाँके र रुपन्देही जिल्ला फाइनलमा पुगेका छन् । रुपन्देहीले नवलरासीलाई ३७ रनले पराजित गरेको हो भने बाँकेले पाल्पालाई ४३ रनले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेका हुन् ।
भैरहवास्थित सिद्धार्थ रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको रुपन्देहीले ९ विकेट क्षतिमा १३३ रनको योगफल बनायो । जसमा निश्चल चौहरीले ४५, सुर दरईले २३ रन बनाए । बलिङमा नवलपरासीका दिलीप कुर्मी, जितेन्द्र साहनी, एकलाख अहम्मद र घनश्याम थारुले समान २÷२ विकेट लिए ।
प्रतिउत्तरमा १४३ रनको लक्ष्य पछ्याएको नवलपरासीले ८ विकेट क्षतिमा ९६ रन मात्रै बनायो । उसका लागि जितेन्द्र साहनीले नटआउट ३३ र सद्दामअली अन्सारीले २१ रन बनाए । बलिङमा रुपन्देहीका कृषि कार्कीले ३, संदीप सुनारले २ तथा मानबहादुर थापाले १ विकेट लिए । कृष्ण खेलमा म्यान अफ दी म्याच घोषित भए ।
दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बाँकेले ६ विकेट क्षतिमा १६१ रन बनायो । उसका लागि अनुपम सिंहले ४४, आकाश विष्टले नटआउट ३३ र सुनिल भण्डारीले २७ रन बनाए । बलिङमा पाल्पाका नरेश कुमार सार्की र सुरेश गोदारले समान ३÷३ विकेट लिए । प्रतिउत्तरमा पाल्पाले ८ विकेट क्षतिमा १२४ रन मात्रै बनाई हार व्यहोर्यो । उसका लागि अजय रसाइलीले ५०, सतिष मगरले ३६ रन बनाए । बलिङमा बाँकेका सुनिल भण्डारी र विजय चौधरीले ३÷३ तथा दीपेन्द्र रावतले १ विकेट लिए । सुनिल म्यान अफ दी म्याच घोषित भए ।
शनिबार उपाधिका लागि रुपन्देही र बाँकेबीच तथा तेस्रो स्थानका लागि पाल्पा र नवलपरासीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा पाँच नम्बर प्रदेशबाट चैतमा हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने क्रिकेट खेलाडी छनोट गर्न अन्तर जिल्लाबीच खेल भइरहेको छ । यहाँबाट उत्कृष्ट १४ खेलाडी छनोट गरी प्रदेशको एउटा टिम बनाई आठौंमा सहभागी गराइनेछ ।
राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको घोषणा, विमल घर्तीमगर टोलीमा परेनन्
मदन भण्डारी स्मृति फुटबल प्रतियोगिता भोलिदेखि
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०१९ : चेन्नईलाई हराउदै मुंबई चौथो पटक बन्यो च्याम्पियन
रुपन्देहीको देवदहमा जारि मेयर कप को उपाधी वडा न. २ लाई
आइपीएल: फाइनलका लागि सन्दिपको टिम दिल्ली र चेन्नइ भिड्दै, सन्दीपको सम्भावना कति ?
उपाधिका लागि गोर्खा ब्यायज र जावलाखेल भिड्ने
प्रतिबन्धित लागु औषधसहित बाँकेमा सात पक्राउ
‘नारायणहिटी राजदरबार’का गाडी उपराष्ट्रपति र सेनालाई
मजदुरको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन गर्न सर्वोच्चको आदेश
उदघोषक तथा क्षमता अभिवृदि तालिम सम्पन्न
सेनाले ग्यो तानसेन बजारको बृहत सरसफाई
जापनिज नागरिक ओकेबाजेलाई तानसेन नगरको साँचो हस्तान्तरण
एसियन फर्मास्युटिकल्स प्रालिमा भिषण आगलागी
गाउँमा सरुवा रोगको प्रकोप ः चिकित्सक र औषधि अभाव